Oraahda Diisambar | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Saadaasha hawada
Iyo ku dhowaad iyada oo aan la ogaan, Diseembar ayaa nolosheena ku soo qulqulaya. Bisha ugu dambeysa ee sanadka muuqaallada koonfurta Hemisphere waxay ku raaxaystaan ​​xagaaga, halka kuwa woqooyi laga caddeeyo midab cad. Halkan Spain, qabow iyo roob ayaa ah halyeeyada ugu muhiimsan taas oo ku qasbeysa dadweynaha inay soo saaraan dharkooda diirran si ay naftooda u difaacaan, laakiin sidoo kale barafka ayaa lagu daadiyaa buuraha ugu sarreeya iyo gobollada ugu woqooyi.
ka oraahda december Waxay noo sheegaan duufaanta, dhaxanta, iyo dabcan, dhamaadka sanadka iyo bilowga mid cusub.
1 Waa maxay cimiladu inta badan bisha Diseembar dalka Isbaanish?
2 Oraahda Diisambar
Waa maxay cimiladu inta badan bisha Diseembar dalka Isbaanish?
Diisambar waa bil ay inta badan aad u qabow tahay. The celceliska heerkulka waa 8ºC tixraac ahaan u qaadashada muddadii 1981-2010, dhaxan iyo barafna waqti dheer kuma qaadaneyso inay soo muuqdaan, gaar ahaan qeybta waqooyi ee jasiiradda.
Haddii aan ka hadalno roobab, waa bil celcelis ahaan 82mm . Si loo helo fikrad cad oo ah waxa inna sugaya, aan aragno waxay odhaahdu noo sheegayso.
Saint Lucia, waa habeenka ugu dheer uguna maalinta gaaban: maalinta Saint waa 13 Disember, oo ah maalinta ugu gaaban sanadka. Laga bilaabo maalinta xigta, habeennadu waxay bilaabaan inay gaabin.
Aroortii iyo fiidkii, bishii Diseembar ayaa ku dhowaad isku wakhti ah: waa sidaas. Bishaan gudaheeda, habeen iyo maalin wey sii socotaa waxbadan ama kayar.
Maalmaha Diseembar, maalmaha qadhaadhka; waa waaberi, durba waa habeen madow: haddii aad ku raaxaysato banaanka, waxaa laga yaabaa inaad dareento murugo ama inaad saacado iftiin ah aad haysato inta lagu jiro bisha Diseembar.
Diisambar, bisha barafka iyo bisha barafka: maahan oo kaliya maalmaha inay ka gaabiyeen laakiin sidoo kale waa qabow, oo waxay noqon karaan kuwo aad u qabow qaybaha waqooyiga ee dalka.
Bishii Diseembar, bakooraddu waa barafoobeen oo xabadka xabbaddu waa la dubay: dhaxan iyo / ama baraf daadad ah, dhirta ayaa dhibata kuwa ugu nugulna sida dhirta ayaa ku dhiman kara. Si kastaba ha noqotee, geedaha miraha, sida xabadka, waxay dhammeeyeen bislaada miraha, oo la cuni karo mid cusub ama duban.
Bishii Diseembar, ma jiro geesi aan gariirayn: inta lagu guda jiro bishaan waxaa fiican in aanad qatar galin. Haddii aad qabow tahay, xir xir si aadan u qabsan hargab.
Saint Nicholas, barafka ku yaal dabaqa: Maalinta Saint waa 6-da Diseembar, oo ah maalin bulshooyin badan oo ku yaal waqooyiga Spain ay baraf cad ugu dilaan magaalooyinkooda iyo dhulkooda.
Bishii Diseembar qabow, iyo kuleyl xagaaga: joogitaanka Spain, waa waxa ay noqon laheyd. Xilliga jiilaalka waa inuu ahaadaa qabow, iyo xagaaga oo kulul.
Bishii Diseembar, adhijirka iyo reer baadiyihii ayaa dayacay laxdii oo dabka ayay shiteen: Markay heer kulka hoos u dhacaan, ma jiraan wax la mid ah in loo dhowaado dab wanaagsan si loo kululeeyo oo loo illaawo qabowga, xitaa haddii daqiiqad keliya.
Ilaa Ilmuhu dhasho, gaajo iyo qabow midna ma aha: mararka qaar way ka dhici kartaa, gaar ahaan koonfurta iyo koonfur-bari dalka, in qabowgu waqti ku qaato inuu yimaado. Sababtaas awgeed, waxaa badanaa la yiraahdaa illaa Diseembar 21, oo ah maalinta Ilmuhu dhasho, qabow iyo gaajo midna ma jiro.
Laga soo bilaabo Ilmaha, qabow iyo gaajo. Kirismaska, balkoonka; ee Istaaska, ilaa erayga: Tan iyo dhalashadii Ilmuhu, waxay u badan tahay in heerkulku hoos uga dhacay waddanka oo dhan, taas oo keentay in dadka oo dhami ay xirmaan.
San Silvestre, dameerkaaga ku xir qashinka: maalinta Awligu waa 31 Disember, waa maalinta ugu dambeysa bisha iyo sanadka. Sidee badanaa u macsalaameysaa sanadka? Duufaan ceeriin ah, sidaa darteed haddii aad xoolo ku haysato bannaanka waa inaad ilaalisaa inta aad awooddo.
Si kasta oo ay qoraxdu u tahay Diseembar, ha u daynin daboolkaaga: qorraxda bishaan uma kululaato sida kulaylka oo kale, tan iyo markii ay falaadhaha noo soo gaaraan ay aad u janjeeraan iyadoo ay sabab u tahay rabitaanka dhulka ee u gaarka ah. Sababtaas awgeed, waa muhiim in marwalba la xiro jaakad ama jaakad si looga fogaado inuu layaabo qabowga.
Roob badan bisha Diseembar, sanad wanaagsan, sug: Waxaa la rumeysan yahay in, haddii roobku aad u badan yahay bisha ugu dambeysa sanadka, sanadka soo socda uu noqon doono mid aad loo adkeysan karo.
Inaadan roob da’in habeenka ciidda Masiixiga, ma jiraan wax abuur wanaagsan: Haddii uusan roob da'in 24-ka Diseembar, Ciidda Kirismaska, miraha dhirta sida basasha ama toonta waxaa laga yaabaa in aysan gebi ahaanba si fiican u bixin.
Yaa qorrax u dhaca Kirismaska, dabka Easter-ka ayaa raadin doonaHadday tahay Maalinta Kirismaska, Diseembar 25, waa qorax, maalinta Ciidda Masiixiga (saddex maalmood ka dib sarakicidda Ciise) dhaxan baan noqon doonaa.
»San Silvestre, sanadka ka tag oo tag». Sannadkii wuxuu ku jawaabay: "Waxaa jira midhihii ugu dambeeyay iyo ubaxkii ugu horreeyay": waxaa laga yaabaa inaanu jeclaan qabowga, laakiin waxaan mar walba hubsan karnaa inaysan jirin wax weligiis jira, oo kuleylku ka soo noqon doono. Caddaynta tani waa ubaxyada ugu horreeya ee ka muuqda geedaha qaarkood bilowga sanadka, sida geedaha yicibta tusaale ahaan, kuwaas oo ubaxyadooda qaaliga ah ee jilicsan ubaxaa dhammaadka Janaayo ama bilawga Febraayo iyadoo kuxiran sida jiilaalku u khafiifsan yahay.
Puig Major, Mallorca.
Miyaad taqaan ereyo kale oo bishaan ah? Hadday haa tahay, si xor ah u dhaaf faallooyinka 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Oraahda Diisambar
Dhuxul dhagaxyada ayaa lumiya 67% cabirkooda
Immisa duufaanno samaysmay 2016?